ရီယိုဒီဂျနေးရိုး - I LOVE RIO DE JANEIRO - သမိုင်းက
ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့ရဲ့သမိုင်းကိုအလှနျ, ကြွယ်ဝသောမတူညီနဲ့ ဘက်စုံသုံး-ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဖြစ်ပါသည် - ငါရီယိုထုံးတမ်းနှင့်အလေ့အကျင့်၏အစောပိုင်းဖွံ့ဖြိုးမှု, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှအစားအစာများနှင့်စတိုင်များ၏ဆိုက်ရောက်, မြို့ရဲ့အထင်ကရအဆောက်အ၏မွေးဖွားသို့ကြည့်ရှု LOVE ။
ဒါဟာ 19 ရာစုအဟောင်းကော်ဖီစိုက်ခင်းကနေရပ်ကွက်၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်, ပွဲတော်များ, ပါတီများ, လာခဲ့တာဖြစ်သလိုအဲဒီအချိန်က, တယ်လီဗေးရှင်းပြပွဲနဲ့ဖက်ရှင်တွေ၏ဇာစ်မြစ်အဖြစ်အတိတ်၏ evocative တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ်လာတဲ့နှင့် ပတ်သက်. စိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းအချက်အလက်ပေး 1970 ၏ဂီတ effervescence နှင့် 80 ရဲ့, နှင့် 20 ရာစုအစောပိုင်း၏ပွဲတော်။
တစ်ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်မူထူးခြားတဲ့ mosaic, လူမှုရေး, ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုခင်းများ၏ကျယ်ပြန့်ဖွဲ့စည်း - ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့ကမ္ဘာပေါ်တွင်အများဆုံးရွေးချယ်စရာများပြားမြို့ကြီးတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ မြို့တော်ရဲ့အတိတ်နားလည်ခြင်းသည်၎င်း၏ခြွင်းချက်နှင့်ပေါင်းစုံခေတ်ပြိုင် identity ကိုနားလည်အရေးကြီးသည်။
အစောပိုင်းတွင်ဌာနေတိုင်းရင်းသားများလူဦးရေကိုကနေပေါ်တူဂီကိုလိုနီအုပ်ချုပ်ရေးအထိ, တစ်ဘုရင်စနစ်ကနေသမ္မတနိုင်ငံရန်နှင့်ပင်တစ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်: ရီယိုရဲ့သမိုင်းကိုတစ်ဦးစိတ်ဝင်စားဖွယ်လမ်းကြောင်းအောက်ပါအတိုင်း။ ၎င်း၏အမျိုးမျိုးသောအရေးကွီးပါယုဂ်တစ်လျှောက်လုံး, မြို့သာယာလှပတဲ့ဗိသုကာပညာ, အနုပညာ, ယဉ်ကျေးမှု, ဂီတ, အစားအစာ, နှင့်တက်ကြွဝိညာဉျကို generated သိရသည်။
ရီယိုရဲ့ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်းကိုသူကသကြား, ရွှေနှင့်ကော်ဖီကုန်သွယ်ရေးအတွက်အရေးကွီးသညျမဟာဗျူဟာအအရေးပါမှုဒေသတစ်ခုဖန်ဆင်းတော်နှင့်ပြည်နယ်သွားတော့ 1763 ခုနှစ်မှာတိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ဖန်ဆင်းခဲ့သည် - ပေါ်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့်နီးပါးနှစ်ပေါင်းနှစ်ရာအဘို့အချွတ်တစ်ခုခေါင်းစဉ်ကို။ ဆိပ်ကမ်းရဲ့ရပ်တည်ချက်နှင့်အရင်းအနှီး၏မြို့တော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်အတန်ငယ်မဖြစ်နိုင် swampy နှင့်တောင်တန်းဒေသများ၏နယ်မြေချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်အီဗိုလူးရှင်းအတွက်အရေးအပါဆုံးအချက်များကိုနှစ်ဦးဖြစ်ယူဆနေကြပါတယ်။
ကုန်သွယ်ရေး-oriented မြောက်ပိုင်းဇုန်, အ posh နှင့် touristy တောင်ပိုင်းဇုန်နှင့်အသစ်တီထွင်ခေတ​​်သစ်အနောက်တိုင်းဇုန်: ရီယို၏ပထဝီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသမိုင်းဆိုင်ရာ Center မှတစ်ဦးထံမှ extension ကိုထွက်နှင့်သုံးပတျဝနျးကငျြဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအားဖြင့်မှတ်သားသည်။
ဘရာဇီးကအဖြစ်လူသိများသည်ဒေသတွင်းအချို့အကောင့်အားဖြင့် Alaska ဖြတ်ပြီးကုန်းကြောင်းသို့မဟုတ်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတလျှောက်ရှိပင်လယ်နားမှာက, အာရှကနေအမေရိကတိုက်အထိမရောက်ရှိသေးသောသူဌာနေတိုင်းရင်းသားများလူဦးရေအားဖြင့်နှစ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏မူလစည်ပင်ခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကား Semi-ခြေသလုံးအနွယ်ထို့ကြောင့်အများကြီးမဟုတ်သူတို့ရဲ့သမိုင်းမှာနှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်, ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားမုဆိုးစုဆောင်းအဖြစ်နေထိုင်ခဲ့နှင့်ဘယ်တော့မှမကျမ်းစာ၌ရေးထားမှတ်တမ်းများသို့မဟုတ်အမှတ်တရဗိသုကာပညာတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုး။ ဤနေ့ငှါ, ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့ဧရိယာအတွက်နေရာအများအပြားရှိနေဆဲဌာနေတိုင်းရင်းသားများစကားလုံးတွေသုံးပြီးအမည် - နာမည်ကျော်ကမ်းခြေ '' Ipanema '' Ipanema '' ငါးဖမ်းရည်ညွှန်း၌ 'မကောင်းတဲ့ရေ' 'အများဆုံးဖွယ်ရှိဟုအဓိပ္ပာယ်နှင့်အတူ, ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့၏မြို့ဒေသခံများကညွှန်ပြယနေ့အသုံးပြုသောအလွန်စကားလုံး '' Carioca '' အဖြူ, အိမ်သူအိမ်သား 'သို့မဟုတ်' 'အဖြူရောင်ယောက်ျား၏အိမ်သူအိမ်သား' 'အဓိပ်ပာယျ' ဆိုတဲ့ဌာနေတိုင်းရင်းသားစကားလုံး '' kari '' oca မှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ''
တမြို့လုံးရပ်တည်ချက်သူတစ်ဦးအားကြီးသောမြစ်၏ခံတွင်းကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးနှင့်အညီမြို့တော်ကို '' ဇန်နဝါရီလမြစ်ကြောင်း '' အမည်ရှိသောခဲ့ယုံကြည်သောသူ Gaspar က de Lemos ဖြင့်ဦးဆောင်သောပေါ်တူဂီလေ့လာရေးခရီးစဉ်အတွင်းဇန်နဝါရီလ 1502 ၏ 1st အပေါ် '' ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ '' ရာဧရိယာ။
ထိုမြို့သည်အမည်ရှိသော '' ဆောပိုလိုSebastião, ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့ပြုပါ '' နှင့်ဆယ်ရှစ်နှစ်မှီတိုငျအောငျ: 1565 ခုနှစ်တွင်ပေါ်တူဂီယေဘုယျအားဖြင့်Estácioက de Sa တရားဝင် 10 နှစ်ဧရိယာ၏ထိန်းချုပ်မှုကိုယူတိုက်ခိုက်နေခဲ့တဲ့ပြင်သစ်ထုတ်ပယ်ရန်ကြိုးပမ်းမှု၌မွို့စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ရာစုနှစ်ကမြို့တော်ကို '' ဆောပိုလိုSebastião။ '' ကျွန်တော့်ကိုခေါ်ခဲ့သည် ဆောပိုလိုSebastiãoပထမ 1565 1st ချီတက်, မြို့တော်ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်း၏အချိန်မှာပေါ်တူဂီရဲ့ရှငျဘုရငျဖွစျသညျ, သူသည်နောက်ပိုင်းတွင်မြို့ရဲ့သူတော်စင်နာယကကိုဖန်ဆင်းသောသူတော်စင်များ၏အမည်တူတင်ဆောင်လာသောခဲ့ပါတယ်: ဆောပိုလိုSebastião။
ပြင်သစ်အောင်မြင်စွာနှစ်နှစ်အကြာတွင်နှင်ထုတ်ခံရပေမယ့်အောက်ပါနှစ်ပေါင်းငါးဆယ်များအတွက်ကြီးစိုးများအတွက်တိုက်ဖျက်ဖို့ဆကျလကျခဲ့ကြသည်။ ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့ပတ်ပတ်လည်ကမ်းရိုးတန်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆိပ်ကမ်းကတဆင့်ကောက်ယူနိုင်ဘရာဇီးက Wood နဲ့သကြားဓာတ်၏အမြတ်အစွန်းကုန်သွယ်ရေး, ၏ပေါ်တူဂီနှင့်ပြင်သစ်ကိုလိုနီဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
17 ရာစု၌မွို့နေဆဲထူထပ်ဌာနေတိုင်းရင်းသားများíndiosဖြင့်လူနေထူထပ်ခဲ့သည်။ တကယ်တော့ 1660 အသုံးပြုပုံကြောင့်သာ 750 ပေါ်တူဂီနှင့် 100 အာဖရိကန်မှနှိုင်းယှဉ်လျှင်, အိမ်တစ်အထင်ကြီး 6000 ဌာနေတိုင်းရင်းသားများíndiosဖို့ဖြစ်တယ်။ နှောင်းပိုင်း 17 နှင့်အစောပိုင်း 18 ရာစုအတွက်, မြို့ကျောင်းအုပ်ကြီးကုန်သွယ်ရေးကိုကျွန်ခံဘို့အမှတ်အဖြစ် Mina Gerais ၏အိမ်နီးချင်းပြည်နယ်အတွက်တူးဖော်ရွှေနှင့်အဖိုးတန်ကျောက်မျက်ရတနာဖြစ်လာပြီး, ဤအကြောင်းပြချက် 1763 အတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်အစိုးရ၏မြို့ကနေပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည် မြို့တော်ပြည်နယ်၏မြို့တော်အောင် ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့ဘရာဇီးနိုင်ငံ၏မြောက်ဘက်-အရှေ့ဘက်တွင်ဆာဗေးဒေါ။
ပျေါတူဂီကိုလိုနီခေတ်တလျှောက်လုံး, 1763 နှင့် 1822 အကြား, ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့ဟာဘရာဇီး၏မြို့တော်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤကာလအတွင်းမှုကြောင့်နိုင်ငံ၏မြို့တော်ကဲ့သို့၎င်း, အစိတ်အပိုင်းအတွက်စီးပွားကူးသန်း၏အရေးပါသောအလယ်ဗဟိုဖြစ်ခြင်းသည်၎င်း၏အဆင့်အတန်းမှအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအတွက်, ရီယိုကမ္ဘာ၏အစိတ်အပိုင်းအတော်များများမှာမှလူကိုဆွဲဆောင်။ ဥရောပ, အာရှနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသများ၏အမျိုးမျိုးသောအစိတ်အပိုင်းများမှရွှေ့ပြောင်းလာသူများနေဆဲယခုရီယို၏ဝိသေသကြောင်းဝါးမြိုခြင်း၏ယဉ်ကျေးမှုမှမူလအစပေးခြင်း, တမြို့လုံး၌၎င်းပတ်ဝန်းကျင်ရှိဒေသများရှိလှုပ်ရှားမှုများတည်ထောင်ခဲ့သည်။
တောင်အမေရိကအတွက်တခြားနိုင်ငံတွေကြံ၏ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ဘရာဇီးနဲ့ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြသည်အဖြစ်နှောင်းပိုင်း 18 ရာစုအတွက်တစ်ဦးစီးပွားရေးအကျပ်အတည်း, မြို့တို့ကိုလုပ်ကြံလေ၏။ ပြောင်းလဲနေသောဒီရေနှင့်ကံကောင်းချင်တော့အောက်ပါအချက်များကိုရာစုအတွင်းသိသိသာသာ ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့အသွင်ပြောင်းလိမ့်မည်။
မှုကြောင့်နောက်ကျောဥရောပတိုက်တွင်ပေါ်တူဂီနှင့်အတူနပိုလီယံ၏ဖြစ်ပွားနေသောစစ်ပွဲ, ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့ 1808 နှင့် 1821 အကြားပေါ်တူဂီ၏ယာယီနိုင်ငံမြို့တော်ဖြစ်လာပြီး, ထိုသို့တော်ဝင်တရားရုံးက 40 သင်္ဘောတစ်စင်းရီယိုလွှဲပြောင်းခဲ့ကွောငျးဤအချိန်တွင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါပေါ်တူဂီတော်ဝင်မိသားစုပေါင်း 20,000 ပျေါတူဂီတရားရုံး၏အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်မွမ်းမံဗိသုကာစံချိန်စံညွှန်းများ, အနုပညာရှင်များ, studious နှင့်ပညာရှင်များနှင့်အသင်းတော်များနှင့်ခေတ်မီသောသံတမန်ရေးရာအလေ့အကျင့်များအတွက်ဆန္ဒတလျှောက်ဆောင်ခဲ့ 1808 ခုနှစ်ရီယို၌ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။
ရီယိုနောက်ထပ်ဥရောပနှင့်ကမ္ဘာ၏ကြွင်းသောအရာနှင့်အတူကုန်သွယ်ရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးချဲ့ထွင်, 1822 ခုနှစ်ဘရာဇီးအင်ပါယာ၏မြို့တော်ဖြစ်လာသည်။ ဤကာလအတွင်းမြို့တော်ကျောင်းအုပ်ကြီးလှုပ်ရှားမှုအမျိုးမျိုးသောမွေးမြူရေးခြံ၏ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်တည်ရှိမှုအတွက်နေဆဲအများအပြားစံအိမ်ကြီးများ၏အဆောက်အဦးမှဦးဆောင်ကော်ဖီထုတ်လုပ်မှုခဲ့သည်။
ကော်ဖီကကုန်ထုတ်လုပ်မှုကိုသိသိသာသာစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးတိုးမြှင်နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်မကြုံစဖူးစကေးပေါ်တွင်ရှိသမျှသောလောကီထောင့်၌ကော်ဖီလူကြိုက်များအောင်, ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့၏အရေးကြီးဆုံးတင်ပို့မှု၏တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။
1822 ခုနှစ်တွင်ဘရာဇီးလွတ်လပ်ရေးစစ်ပွဲစတင်ခဲ့ပြီးနှင့် ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့သစ်သည်နှင့်လွတ်လပ်သောဘုရင်စနစ်၏မြို့တော်ဖြစ်လာသည်။ နောက်ပိုင်းမှာ, မြို့ 1889 မှီတိုငျအောငျ, နှင့်နောက်ဆုံးတွင်ဘရာဇီးရီပတ်ဘလီကန်နှစ်တာကာလအတွင်းနိုင်ငံမြို့တော် Brasilia ဖို့ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်သည့်အခါ 1960 ခုနှစ်အထိဘရာဇီးအင်ပါယာ၏မြို့တော်အဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေခဲ့သည်။
၎င်း၏သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံး ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့ 1888 ခုနှစ်တွင်ကျွန်စနစ်၏ဖျက်သိမ်းခံနှင့် 1889 ခုနှစ်တွင်တစ်သမ္မတနိုင်ငံဖွဲ့စည်းခြင်းမှဦးဆောင်ပြီးကြောင်းခိုင်ခံ့တီထွင်ဆန်းသစ်နိုင်ငံရေးနှင့်အသိပညာဆိုင်ရာရေစီးကြောင်း၏စိတ်နှလုံးခဲ့သည်။
ကော်ဖီနှင့်ကြံစိုက်ခင်းဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်လုပ်သားများ၏ကျဆင်းမှုနှင့်အတူ, မြို့, ဥရောပရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူနှင့်ယခင်ကျွန်အမြောက်အများလက်ခံရရှိဖို့စတင်ခဲ့ပေးဆောင်လုပျငနျးအတှကျအလားအလာများကဆွဲဆောင်နှင့် 1872 နှင့် 1890 အကြားလူဦးရေနှစ်ဆတိုး။ ဤသည်မှာလူဦးရေပေါက်ကွဲမှုဖြစ်နှစ်လယ်ပိုင်းကိုးရာစုကတည်းကတည်ရှိခဲ့သောအိမ်ရာအကျပ်အတည်းဆိုက်စေနှင့်မသေချာလှအိမ်ယာအခြေချမြို့ရဲ့တောင်ကုန်းပေါ်ကနေပေါ်ထွက်လာဖို့စတင်ခဲ့ဤအခြေချအကြာတွင်ကိုခေါ်ခံရဖို့လာလိမ့်မယ် '' favelas, '' တာကြောင့်မိမိတို့အဝိသေသကြည့်ရှုရန်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းယခုကျော်ကြားခြင်းနှင့် ထိုကဲ့သို့သောဂီတလာခဲ့တာဖြစ်သလိုအဲဒီအချိန်က '' Samba 'နှင့်ကြောင့်ချီတက်ပွဲမွို့ထဲမှာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအံ့မခန်းပွဲတော်အသင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖြစ်ဟာသူတို့ရဲ့အရေးကွီးပါယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုများ။
ဒီအဟောင်းကျွန်ခံဖို့အပြင်မင်းသမီး Isabel ၏အမိနျ့တျောအားဖွငျ့ 1888 ခုနှစ်တွင်လွတ်မြောက်လာကော်ဖီနှင့်သကြားစိုက်ခင်းထဲကနေ - 1890 by ခန့်လူဦးရေသန်းတွေအကြောင်းလေးပုံတစ်ပုံရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူဖြစ်ခြင်းနှင့်တကွ, မြို့မြို့၌နေထိုင်ခဲ့သည်။
အစောပိုင်း 20th Century မြို့တော်ဝန် Pereira Passos အတွက်လမ်းများ, ကျယ်ပြန့်နည်းလမ်းနှင့်ခေတ်မီအဆောက်အဦးများတည်ဆောက်ခြင်း, အဖြစ်မြို့လယ်နှင့်ကျပတျဝနျးကငျြခရိုင်မှကတ္တရာခင်းပေးမြို့တော်ရဲ့မြို့ပြထည်မှကျယ်ပြန့်စကေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုပါသည်။ အခြေခံအဆောက်အအုံအချိန်ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင် architecture ပေါ်တွင်လုပ်ပါတယ်ခဲ့ပါတယ်နှင့်အရေးအပါဆုံးနှင့်သြဇာတိက္ကအလုပ်အချို့ကို ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့ရဲ့သမိုင်းထဲမှာရာအရပျယူကြပြီမှစဉ်းစားသည်။ ဤသည်ဝေါဟာရများ "Cidade maravilhosa", သို့မဟုတ်' 'အံ့သြစရာကောင်းတဲ့မြို့,' 'မွေးဖွားခဲ့ပြီးအစဉ်အမြဲမြို့ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဝိသေသလက္ခဏာအတွက်ထွင်းခံရတဲ့အခါဖြစ်ပါတယ်။
အတွင်းပိုင်းသေးငယ်တဲ့စာရေးတံ ချ. ဝေနှင့်မွေးမြူရေးခြံဖြင့်လူနေထူထပ်နေစဉ်ဤအချိန်တွင်မြို့တော်ရဲ့နှလုံး, ကမ်းရိုးတန်းပင်လယ်အော်ဖွငျ့တစျဘက်မှာ delimited ၎င်း၏အလယ်ဗဟိုမှာအိပ်လေ၏။ 20 ရာစုအဆုံးဆီသို့ဦးတည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရောက်ရှိလာမှုနှင့်အတူလူဦးရေကိုပြောင်းလဲဖို့စတင်ခဲ့ပြီးလျှပ်စစ်ပေါ်လာတာမြို့တော်ရဲ့နယ်နိမိတ်များကိုချဲ့ထွင်, သူတို့ရဲ့အလုပ်ခွင်ကနေသိသိသာသာအကွာအဝေးမှာအသက်ရှင်ဖို့လူတွေကို enabled ။ အဆိုပါလူနေအိမ်, မြို့ပြထည်မွောကျပိုငျးဇုန်ဖွဲ့စည်းရန်ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက်နှင့်အတွင်းပိုင်းဆီသို့ဦးတည်ထွက်ချဲ့ထွင်နေစဉ်, စီးပွားကူးသန်းနှင့်စီးပွားရေး၏ဒေသတွင်းမှာ - ပင်လယ်နှင့်ပင်လယ်နှင့်နီးစပ်သောအဟောင်းကိုမြို့, '' Centro '(စင်တာ) သို့လှည့်ခဲ့သည်။ လုပ်ငန်းချဲ့ထွင်ခြင်း, တောင်များချိုင့်ဖြင့်ထွင်းထုများနှင့်ကမ်းခြေအားဖြင့်စီတန်းထားရာမြို့, ၏ပိုင်ထိုက်သောမြေမျက်နှာသွင်ပြင်န်းကျင်စီမံကိုင်တွယ်ခဲ့ရသည်။
1920 နှင့် 1950 ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းရဲ့ ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့အကြား High-end ဧည့်သည်များနှင့်နိုင်ငံတကာအနုပညာရှင်များနှင့်အတူအလွန်အမင်းလူကြိုက်များဖြစ်လာခဲ့သည် - ဒါကြောင့်နာမည်ကျော် Copacabana Palace ဟိုတယ်၌ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်နှင့်ကျော်ကြားသောရုပ်ရှင်များရိုက်ကူးခဲ့ကြကြောင်း, 1923 ခုနှစ်, ဒီကာလအတွင်းခဲ့သည်။
ထို 1930 ခုနှစ်ရဲ့အဖြစ်ယခင်ကအဖြစ်ထူးခြားဆန်းပြားကမ်းခြေနေရာများ၏ပဋိသန္ဓေယူခဲ့သော Copacabana, Ipanema နှင့် Leblon ၏သမုဒ္ဒရာထဲ-ရှေ့တွင်ခရိုင်, အလွန်မြင့်မားမှတ်လူနေအိမ်တည်နေရာ, ထိုဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၏အဖွင့်မှကျေးဇူးတင်စကားနှင့်လမ်းရထားလိုင်းများရောက်ရှိလာဖြစ်လာခဲ့သည်။
ထိုအချိန်ကာလ၏စာပေနှင့်ကျန်းမာရေးကမ်းရိုးတန်းလေနှင့်ပင်လယ်သည်ရေချိုးနှင့်ကမ်းခြေ၏လူမှုရေးအကျိုးခံစားခွင့် extolled နှင့်ကမ်းရိုးတန်းဘဝကိုအသစ်ကလမ်းကြောင်းသစ်ဖြစ်လာခဲ့သည် - ရှုပ်ထွေးမှုများ၏အမှတ်အသားနှင့်အထက်တန်းလွှာအပန်းဖြေ။ တောင်ပိုင်းဇုန်ကြီးကျယ်သောဟိုတယ်များ, သန့်စင်ပြီးစားသောက်ဆိုင်များ, ရုပ်ရှင်ရုံ, ကလပ်အသင်းများနှင့်ရုပ်ရှင်ရုံမှနေအိမ်, မြို့များ၏ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာစိတ်နှလုံးအဖြစ်ရှုမြင်ခံရဖို့ရောက်လာတယ်။ ဂီတအနုပညာ '' Bossa Nova '' အသက် 70 ရဲ့, အဲဒီဒေသတွေအတွက်မွေးဖွားခဲ့ပြီး 1960 ခုနှစ်တွင်ငုံခံခဲ့ရသည်။ 80 ရဲ့။
1960 ခုနှစ်တွင်, ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံမြို့တော်ဘရာဇီးယဉ်ကျေးမှုမြို့တော်ကိုဖြစ်ခြင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်အသစ်တခု identity ကိုရှာတွေ့မှတမြို့လုံးကိုနှိုးဆွ, Brasilia မှရီယိုကနေပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။
ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများနှင့်လမ်းများဖန်တီးကိုလည်းပြင်းထန်သောဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုမှအနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းလမ်းပိုင်းဖွင့်လှစ်။ 1970 ကာလအတွင်းဧရိယာကိုချမ်းသာကြွယ်ဝလူဦးရေ၏ကြီးမားသောကျိူးသက်ရောက်မှုရှိလာသည်အနောက်ဘက် Recreio dos Bandeirantes, အံ့မခန်းဥယျာဉ်များနှင့်ကမ်းခြေနေရာဖြစ်သည်မှထပ်မံ Barra ကို da Tijuca ၏ခရိုင်မှပြောင်းရွှေ့အဖြစ်ခွင့်ပြုတဲ့လွန်စွာအရှိန်မြို့ပြ process ကိုမျက်မြင်။ အိမ်များ, ကွန်ဒို, ကုန်တိုက်ကြီးတွေနဲ့စံအိမ်ကြီးများအကြီးစားမြို့ထဲတွင်အများဆုံး Modern ခရိုင်မှမြင့်တက်ပေးခြင်း, အနောက်ပိုင်းရှုခင်းသှားရောကျနထေိုမှစတင်ခဲ့သည်။
1990 ရဲ့စတင်ခြင်း, စည်ပင်သာယာအင်အားကြီးစဉ်ဆက်မပြတ်အပြည့်အဝမြို့ရဲ့မြို့ပြနှင့်ဂေဟစနစ်အလားအလာရှိသောစုစည်း, မြို့-ကျယ်ပြန့်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုနှိုးဆွခြင်း, ယဉ်ကျေးမှု, အပန်းဖြေခြင်းနှင့်အားကစားလှုပ်ရှားမှုများမြှင့်တင်ပါပြီ။ ပြတိုက်နှင့်အနုပညာပြခန်းမြို့အနှံ့ကိုပြန်လည်ဆန်းသစ်လာနှင့်တီထွင်ခဲ့ကြနေစဉ်ကမ်းခြေ, ထိုကဲ့သို့သောဂီတဖျော်ဖြေပွဲနှင့်ပြပွဲအဖြစ်အားကစားနှင့်လှုပ်ရှားမှုများများအတွက်အပန်းဖြေနေရာများသို့အသွင်ပြောင်းခဲ့ကြသည်။ မြို့သူမြို့သားတို့သည်ယေဘုယျအားဖြင့်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုပြန်လည်ရှင်သန်ရေးကို 2014 ခုနှစ်ထိုကဲ့သို့သောဖီဖာဘောလုံးကမ္ဘာ့ဖလားပွဲကဲ့သို့သောအရေးပါအားကစားဖြစ်ရပ်များ, hosting ပါဝင်သည်။
မြို့ရဲ့သမိုင်းအတွက်အရေးပါသောမှတ်တိုင် ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့အနှံ့အများအပြား favelas ရဲယူနစ် pacifying ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့်အတူ 2008 ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့ပြီးဤတပ်ဖွဲ့များသည်သိသိသာသာအသစ်တစ်ခုကိုနှိုးဆွ, အသကျရှငျလာရောက်လည်ပတ်နှင့်စီးပွားရေးပို့ချဘို့မြို့တော်ကိုအများကြီးပိုမိုလုံခြုံအောင်ရာဇဝတ်မှုများ၏အဆင့်ဆင့်လျှော့ချ တိုးတက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ကမ္ဘာ့အစင်မြင့်ပေါ်ရီယိုရဲ့အသစ်နှင့်ဂုဏ်သတင်းကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှမီးမောင်းထိုးပြ၏ကာလ။
ယင်း၏ဆိပ်ကမ်းတောင်များနှင့်ကမ်းခြေ - ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုယင်း၏ဌာနေတိုင်းရင်းသားများစ, ကိုလိုနီနယ်ချဲ့၏အမွေဆိုး, နိုင်ငံတကာယဉ်ကျေးမှုကျယ်ပြန့်စစ်ခင်းကျင်းလျက်, မြို့ရဲ့ပထဝီအနေအထားတည်နေရာကနေအရေးကွီးပါသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအားဖြင့်မှတ်သားသည်။ မြို့တော်ရဲ့တမူထူးခြားတဲ့သမိုင်းကိုအမှန်တကယ်အော်ဂဲနစ် entity နှင့်ယဉ်ကျေးမှုများနှင့်အတွေးအခေါ်များတစ်ဦးအသကျရှငျကစားကွင်းသို့ထုဆစ်ထားသည်။
ယင်းဒေသ၏လူဦးရေမှာတောင်ကြီးတို့နှင့်အနီးတဝိုက်, ကမ်းရိုးတန်းပို်ပေါ်နှင့်ရေကန်များ, နားမှာနှင့်ဂွ၏ဘဏ်များမှတလျှောက် 16 ရာစုအတွက်စတင်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင်ပြည်မှအများကြီးရေလွှမ်းမှ swampy နှင့်ထိခိုက်လွယ်ခဲ့ဒါအစောပိုင်းနှစ်များတွင်တောင်ကုန်းပေါ်ကနေအိမ်ရာများနေဆဲထိုကဲ့သို့သောGãveaနှင့်ဆောပိုလို Conrado အဖြစ်ချမ်းသာကြွယ်ဝခရိုင်အတွက်၎င်း၏ပဲ့တင်သံတွေရှိပါတယ်သောပိုနှစ်သက်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော်အချိန်ကျော်, စောင်း favelas နှင့်အနိမ့်သည်ဝင်ငွေလူဦးရေ၏ဒိုမိန်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ တချိန်တည်းမှာပင်, အစောပိုင်း 20th Century အတွက်ကမ်းခြေမှာယဉ်ကျေးမှုကိုများအတွက် predilection ကမ်းရိုးတန်းဆီသို့ဦးတည်မြို့လယ်မှကြီးစွာသောပြောင်းရွှေ့ဖို့ဦးဆောင်နေပါတယ်။ ငါရီယိုဟာသူ့ရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်အတိတ်မှမြို့တော်ရဲ့ခေတ်ပြိုင်သမိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုရှုခင်းကိုဆက်သွယ်ထားသောဤပထဝီ Module စူးစမ်း LOVE ။